အဆိုပါ PC မှာဂိမ်း FIGHTING: အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ် - ဂိမ်းပြဿနာများ - 2019
အဆိုပါ PC ကိုအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲများဂိမ်း 10: ပူဖြစ်လိမ့်မည်
ဂိမ်းကစားကွန်ပျူတာဖျော်ဖြေရေးနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်ဒိုင်းနမစ်ကိုရှာဖွေနေသည် shooters နှင့်တုတ်ဓားဖို့, ဒါပေမယ့်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာခဲ့သည့်တိုက်ပွဲများဂိမ်းအမျိုးအစားပေါ်တွင်သာအာရုံစိုက်ပရိသတ်တွေ၏သစ်စာရှိတပ်မတော်စောင့်ရှောက်။ အဆိုပါဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဂိမ်းအံ့သြဖွယ်စီးရီး, ကျိန်းသေအဆိုပါ PC မှာဆော့ကစားသင့်သောအကောင်းဆုံးတှေအမြားကွီးပါပဲ။
Naruto ကို Shippuden: Ultimate Ninja Storm တော်လှန်ရေးတွင်
ဂိမ်းရဲ့ storyline ကတော့ MK9ပြီးနောက် 20 နှစ်တာကာလကိုဖုံး
အဆိုပါဝေးနေရာက 1992 ခုနှစ်ကနေဂိမ်း Mortal Kombat စီးရီး၏သမိုင်း။ MK - စက်မှုလုပ်ငန်း၏သမိုင်းအတွက်တိုက်ပွဲများဂိမ်းအမျိုးအစားများ၏အများဆုံးမှတ်မိကိုယ်စားလှယ်တဦးတည်း။ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ထူးခြားသောပေါင်းစပ်၏အထူးအစုံရှိပါတယ်တစ်ခုချင်းစီကိုအဘယ်သူကို၏ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးကြီးမားသောအမျိုးမျိုးနှင့်အတူဤသည်ပြင်းထန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှု။ ကျွမ်းကျင်စွာအဆိုပါတိုက်လေယာဉ်များထဲမှကျွမ်းကျင်ဖို့လေ့ကျင့်ရေးဘို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့ရှိသည်။
Mortal Kombat ဂိမ်းမူလကတစ်ဦးလိုက်လျောညီထွေအဖြစ်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ် "Universal Soldier ။ "
စီးရီးအားလုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအထူးသဖြင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ, နှင့်နောက်ဆုံး Mortal Kombat9Mortal Kombat X နှင့်ကစားသမားတိုက်ပွဲများအနိုင်ရခြင်းဖြင့် high-resolution bloodiest သေဆုံးခဲ့ပြီးစဉ်းစားနိုင်ကြ၏။
2015 ခုနှစ်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်ဖြန့်ချိသည့် PlayStation platform ပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးတိုက်ပွဲများဂိမ်းတစ်ခုမှာ။ ဒီဂိမ်းကို 1994 ခုနှစ်တွင်သလောက်ဇာတ်လမ်းနှင့်အတူထွက်ယူသွားတတ်၏ထားတဲ့ဟာအလွန်တောက်ပနှင့်အမှတ်ရစရာတိုက်လေယာဉ်များနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းကြံစည်မှု, Mishima ၏ဆက်ကပ်အပ်နှံမိသားစု, ရှိပါတယ်။
Tekken7ကစားသမားထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်တစ်ခုလုံးအသစ်သောရှုထောင့်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်: သင်၏ပြိုင်ဘက်ကြီးစိုးပင်လျှင်, အရေးပါသောအဆင့်ကိုဇာတ်ကောင်မှကျန်းမာရေးကဆြုံးက၎င်း၏ HP က 80% အထိကွာတာအားဖြင့်ပြိုင်ဘက်ကိုဆင်းဒဏ်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အသစ်အစိတျအပိုငျးခုခံကာကွယ်လုပ်ရပ်များမျက်နှာသာမပေးပါဘူး: ကစားသမားယူနစ်ဖော်ထုတ်မဟုတ်တစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကား Bash အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
Tekken7otherworldly တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်ကိုချိတ်ဆက်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုက်ပွဲတွေနှင့်ကောင်းတစ်မိသားစုသမိုင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, စတူဒီယိုစီးရီး BandaiNamco ၏အစဉ်အလာကိုဆက်လက်။
ဂိမ်း Mortal Kombat ၏အဆုံးပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ရပ်များ: အာမဂေဒုန်
2011 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိကြီးစွာသောတိုက်ပွဲများဂိမ်း Mortal Kombat ၏နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။ Mortal Kombat X ကို၏လူကြိုက်များနေသော်လည်းစီးရီး၏နဝမဂိမ်းနေဆဲသိသာနှင့်ရှိခိုးနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှထူးခြားတဲ့ပါသလဲ MK စာရေးဆရာများကတော့ကိုးဆယ်ပြန်လည်ကြွလာတော်တစ်ဂိမ်း storyline မူရင်းစီမံကိန်းများတွင် fit နိုင်ခဲ့ကြတယ်။
မက္ကင်းနစ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်တော်တော်လေးအရှိဆုံးပြောင်းလဲနေသောနှင့်သွေးထွက်သံယိုတစ်တိုက်ပွဲများဂိမ်းတဦးတည်းအောင်, ထ hiked ။ အခုစစ်မြေပြင်ကိုကျော်ကစားသမားသူတို့ကိုအလျှင်အမြန်ပေါင်းစပ်အတွက်သေစေနိုင်သောရိုက်စီရင်ခွင့်ပြုထားတဲ့တာဝန်ခံက X-ray, စုပြုံ။ သို့သျောလညျးကိုအာရုံစိုဂိမ်းကစားအခြားတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာထားမရှိစေရေးအတွက်ပြိုင်ဘက်များ၏လုပ်ရပ်များစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်အများဆုံးမကြာခဏပြုလုပ်ခန္ဓာဗေဒအသေးစိတျနဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် cutscene အတွက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သြစတြေးလျအတွက် Mortal Kombat များ၏ရောင်းရငွေသို့မဟုတ်ဝယ်ယူမှုအတွက်ပြစ်ဒဏ် 110 တထောင်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
Tekken "သံလက်သီး" အဖြစ်ဘာသာပြန်ထားသောဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျပွနျသှားနှငျ့အခြို့ဂန္တိုက်ပွဲများဂိမ်းကစားချင်တယ်ဆိုရင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် Tekken3Port ဗားရှင်းစမ်းပါ။ ဤစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၏သမိုင်း၌အကြီးမြတ်ဆုံးတိုက်ပွဲတွေဂိမ်းထဲကတစ်ခုစဉ်းစားသည်။
ဒီဂိမ်းကို 1997 ခုနှစ်မှာပြန်ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်ဂိမ်းကစားသည့်တိုက်လေယာဉ်များ၏သမိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဗီဒီယိုတစ်ကားကိုပြသရာတစ်ခုချင်းစီရဲ့အဆုံးမှာ, ထူးခြားတဲ့ mechanics ရဲ့, ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဇာတ်ကောင်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကြံစည်မှု Ladera နှင့်အတူသူ့ဟာသူခွဲခြားခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်ကင်ပိန်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကျမ်းပိုဒ်အသစ်တစ်ခုသူရဲကောင်းဖွင့်လှစ်။ ဂိမ်းကစားနေဆဲ, ထိုမော်ကွန်းဆရာဝန် Boskonovicha ယစ်မူးသောမှတ်မိရယ်စရာဒိုင်နိုဆောဂုဏ်နှင့် Simulator ကို Mokudzina နှင့် fanovy mode ကိုဘော်လီဘောယခုအချိန်အထိကစားရန်ပျော်စရာဖြစ်ဟန်!
ဒီဂိမ်းကို 2014 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
အသစ်နှင့်တော်လှန်ရေးတစ်ခုခုကိုစောင့်ဆိုင်းရကျိုးနပ်ဂျပန်တိုက်ပွဲတွေဂိမ်း၏ဖန်တီးမှုအဘို့တဲ့အခါမှာယူ။ ဒါကြောင့်တိုက်ပွဲများဂိမ်းအမျိုးအစား၏မူလ anime နှင့်ပရိတ်သတ်တွေနှစ်ဦးစလုံးပရိသတ်တွေနှစ်သက်ခဲ့ပါသည်ကြောင့် Naruto ကိုဝဠာဂိမ်းမူရင်းနှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်မရမှာအားလုံး, စုံလင်သောအထဲကလှည့်။
အဆိုပါစီမံကိန်းသည်ဂရပ်ဖစ်နှင့်ပုံစံ၏ပထမမိနစ်ကနေသပိတ်မှောက်သည်နှင့်ဇာတ်ကောင်များ၏မျက်စိမတူကွဲပြားမှုကိုအရပ်ရပ်ကွဲပြားစေ။ အများဆုံးမကြာခဏမတ်စောက်သောပေါင်းစပ်အောင်ဘို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ keyboard shortcuts တွေကိုအသုံးပြုကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်စစ်မှန်သော, ကစားသမားဖို့ဂိမ်း, အများဆုံးအဆင့်မြင့်တိုက်ပွဲဂိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါဂိမ်း၏ရိုးရှင်းမှုအတွက် Naruto ကို Shippuden အတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ကာတွန်းသောကွောငျ့, developer များအဘို့အခှငျ့လှတျခံရနိုင်သည် Ultimate Ninja Storm တော်လှန်ရေး stunning ။ ဒေသခံသေဆုံးမှုချက်အပ်နှင့်ဇာတ်ကောင်သေချာပေါက်ဟောင်းမကျေလည်မှုကိုသတိရနေတဲ့အချို့သောပြိုင်ဘက်အတူထားသောစာပိုဒ်တိုများပစ်ချသို့မဟုတ်တှေ့ဆုံစိတ်တော်။
စီမံချက်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက် 2013 ခုနှစ်အရပျကို ယူ. ,
superhero DC ကဝဠာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုက်ပွဲများဂိမ်းများတို့သည်ဤလောကသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီအများအပြားယောက်ျားလေးများကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အိပ်မက်မက်သည်ကားအမှန်တကယ်အားကောင်းသူသည်အထဲကရှာတွေ့ - Batman သို့မဟုတ် Wonder Woman? ဒါပေမယ့်ဂိမ်းခဲ groundbreaking နှင့်တော်လှန်ရေးသမား, ကျွန်တော်တို့အားလုံးရှေ့မှာအတူတူ Mortal Kombat ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေမယ့်ရုပ်ပြထဲကနေဇာတ်ကောင်နှင့်အတူနေသည်။
အဆိုပါကစားသမား Ladera တိုက်ခိုက်နေအပေါ်သွားကြဖို့တစ်ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်ဝတ်စုံဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် unpretentious ပေါင်းစပ်များစွာအလွတ်ကျက်ရန်ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ အများဆုံးမူရင်းဂိမ်းဖြစ်ခြင်းမဟုတ်နေသော်လည်းမတရားမှုကိုပရိသတ်ကိုလေထုနှင့်မှတ်မိဇာတ်ကောင်ကိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ဂိမ်းဇာတ်လမ်း DC ကကာတွန်းထဲကနေအတိုင်ပင်ခံများ၏တက်ကြွစွာပါဝင်မှုနှင့်အတူရေးသားခဲ့။ ဂိမ်းဇာတ်ကောင်စကားပြောများ၏စစ်မှန်လမ်းထိန်းသိမ်းထားကြပါပြီဒါကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်နှစ်ဦးကိုစာရေးဆရာအထူးသ, စောင့်ကြည့်။
အလွန်ရောင်စုံဇာတ်ကောင် - ဂိမ်း၏အဓိက Trump ကတ်များများထဲမှရှေ့မှာအဖြစ်
ပဉ္စမ Street Fighter 2016 လွှတ်ပေးရန်ယခင်အစိတ်အပိုင်းများဂိမ်းစိတ်ကူးများ၏အိတ်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ SF ဿုံ multiplayer တိုက်ပွဲများမှာသူ့ဟာသူထင်ရှားပေမယ့် Single-player ကိုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပျင်းစရာနှင့် monotonous ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုသည်အခြားလူကြိုက်များတိုက်ပွဲများဂိမ်းအတွက်ယခင်ကအသုံးပြုခဲ့ပြီးသော EX-စကေးအထူးရွေ့လျား, ယူအမြတ်ထုတ်။ အဆိုပါ developer များမှာလည်းစီးရီး၏တတိယအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၏တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် mechanics ရဲ့ဆက်ပြောသည်ပါပြီ။ စတုတ္ထ "လမ်းတိုက်လေယာဉ်" မှလွဲချော်သပိတ်ပြီးနောက်ပါဝါသိုလှောင်မှုအဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမျက်တော်ပြေခြင်းစကေးသို့ရောက်ကြ၏။ ဤအချက်များ combo တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးဧည့်ခံ၏ activation ဖျော်ဖြေဖို့သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
2016 ခုနှစ်တွင် eponymous လူကြိုက်များအမေရိကန်ပြပွဲထံအပ်နှံထုတ်ဝေ WWE 2k17, ရောက်တော်မူ၏။ နပန်းကိုချစ်ပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလေးစား, ဒါကြောင့်အားကစား Simulator ကိုတိုက်ပွဲဂိမ်းပရိသတ်တွေမှကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှိုးဆော်ခြင်း။ Yuke ရဲ့စတူဒီယို၏စာရေးဆရာများမျက်နှာပြင်မှကျော်ကြားသောနပန်းသမားများအား၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူအံ့မခန်းတိုက်ပွဲများဆောင်ကြဉ်းနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဂိမ်းမျှကွဲပြားခြားနားသော convoluted ဂိမ်းဖြစ်ပါသည်: ဂိမ်းကစားပေါင်းစပ်လွတ်ကျက်ဖို့နဲ့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ထားခဲ့ပါနှင့်ရောနှောပြီးရှောင်ဖို့လျင်မြန်စွာ-Time-ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ရပ်တုံ့ပြန်ရန်ရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအောင်မြင်သောတိုက်ခိုက်တဲ့အထူးဧည့်ခံဘို့တာဝန်ခံစုဆောင်း။ ပစ္စုပ္ပန်ပြပွဲ၌ရှိသကဲ့သို့, WWE 2k17 ၏ရန်ပွဲဝေးသင်လက်မှာပစ္စည်းများနှင့်တားမြစ်ထားသောနည်းလမ်းများသုံးနိုငျရှိရာလက်စွပ်ထက်ကျော်လွန်သွားပါလိမ့်မည်။
WWE ခုနှစ်တွင် 2k17 တစ်စစ်အစိုးရတိုက်လေယာဉ်သာ, ဒါပေမယ့်လည်းပွဲ၏စည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်။
အင်ဂျင်နှင့်ဂိမ်း Skullgirls တိုက်ပွဲတွေဂိမ်းအံ့ဩခြင်း vs. ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်မှာဖန်တီးခဲ့ကြ Capcom 2: သူရဲကောင်းများ၏နယူးခေတ်
အများစုမှာဖွယ်ရှိ, 2012 ခုနှစ်တိုက်ပွဲများအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ကွားလြှငျ, ဒါပေမယ့်ဆောင်းဦးရာသီအားကစားပြိုင်ပွဲကနေဂျပန်စာရေးဆရာများ၏စီမံကိန်းဂျပန်အတွက်အလွန်ရေပန်းစားသည်။ SkullGirls ကစားသမား anime-style ကိုကိုမိုးလှပသောမိန်းကလေးထိန်းချုပ်ဖို့ယူသော multi-တိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Voitelnitsy အထူးကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်, ဆန့်ကျင်လာကြတယ်ရှောင်တစ်ဦးသေစေလောက်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါ။ ထူးခြားတဲ့ကာတွန်းနှင့်အများဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောခေတ်သစ်တိုက်ပွဲများဂိမ်းများအနက် SkullGirls လုပ်နေတာ၏မြင့်မားသည် non-အသေးအဖွဲစတိုင်။
တိုက်လေယာဉ်နှုန်း 1439 frames များကိုပျမ်းမျှ - Skullgirls ဇာတ်ကောင်အပေါ်ကာတွန်း၏ဘောင်၏အမြင့်ဆုံးနံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူဂိမ်းအဖြစ်မှတ်တမ်းများ၏ဂင်းနစ်စာအုပ်၌ရှိ၏။
အဆိုပါဂိမ်း 2018 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
Soulcalibur ၏ပထမဦးဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုးဆယ်အတွင်း PlayStation ပြန်ပေါ်သည်ထင်ရှား။ , ထိုအခါတိုက်ပွဲများဂိမ်းအမျိုးအစားစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ Namco ကနေဂျပန်များ၏အသစ်အဆန်းမမျှော်လင့်ဘဲအသစ်ကဂိမ်း element တွေကိုယူဆောင်ခဲ့သည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ် Soulcalibur - တိုက်လေယာဉ်များအသုံးပြုခဲ့သောအအေးသံမဏိ။
ဇာတ်ကောင်များ၏ဆဋ္ဌမတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်၎င်း၏ညာဘက်ဓါးသွားကို အသုံးပြု. အလျှင်အမြန် combo လုပ်ဆောင်အဖြစ်မှော်ပါဝငျသညျ။ အဆိုပါ developer များဇာတ်ကောင်များ၏မူရင်းသွန်းဂိမ်းအဆိုပါ Witcher ၏ဧည့်သည်အံ့သြသွားဖြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Geralt ဿုံအဆိုပါ lore Soulcalibur သို့ fit နှင့်လူကြိုက်အများဆုံးဇာတ်ကောင်တဦးဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါ PC ကိုအပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးတိုက်ပွဲများဂိမ်းများကိုအနုပညာ၏ဆယ်ကိုယ်စားလှယ်များဖို့ကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်ဤအမျိုးအစား၏ညီတူညီမျှတောက်ပခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်စီမံကိန်းများကိုပိုမိုအရေအတွက်ကိုမှတ်မိပေမယ့်သင်အထက်တွင်စီးရီးထဲကတစ်ခုကစားကြပြီမဟုတ်လျှင်, ဒီကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့နဲ့အဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲတွေ, combo နှင့်သေဆုံးမှု၏လေထုထဲသို့ထိုးဖို့အချိန်ပဲ!
ဝင်လာသောဆက်သွယ်မှုများအတွက် Skype ကို software ကို port နံပါတ်များ
အကြောင်းရင်းနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ: Windows7ကို install လုပ်မနေပါနဲ့
Jeta Logo ဒီဇိုင်နာ 1.3
အလုပ်မလုပ်ပါဘူးသို့မဟုတ် Mail.Ru Agent ချိတ်ဆက်မထားဘူး
Canon ၏ i-SENSYS MF4018 အဘို့ပရင်တာ drivers တွေကို Download
အချိန်ကြာမြင့်စွာခေတ်သစ်ဟင်းချိုမီဒီယာပြန်ဖွင့်ပထမဦးဆုံးကြွလာတော်မူသောအဘို့ဘက်စုံသုံးပေါင်းစပ်ဖြစ်ကြသည်။ သဘာဝကျကျ, သင့်လျော်သော software များ - စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet ပေါ်မှာ applications များ၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားများထဲမှ။ အနည်းငယ်ထိုသူတို့တွင်တကယ်ကြီးမားပေမယ့်တကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များကိုရှေးခယျြခွငျး။ ဆက်ဖတ်ရန်